လဖိုင်| July 19, 2012 | Hits:4,166
မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက် တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အားကိုးနေမလားအာဆီယံ၏ အားနည်းချက်က တရုတ်အတွက် အားသာချက် ဖြစ်နေဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲကို တရုတ် လက်မခံ၍ ဟောင်ကောင်သားများ ဆန္ဒပြတနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ် စာချုပ် ရေးဆွဲမှု ဆက်လက် ညှိနှိုင်းရဦးမည်အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးပြီး ၅ ရက်အတွင်း အသက်ဝင်ရန် သဘောတူ
Zaw Wate July 20, 2012 - 12:34 am Dear Editor,
Reply san July 20, 2012 - 9:01 am where did get KIA’s arms from?china????????????
Reply ညီနောင် July 20, 2012 - 12:03 pm ဘယ်ကရလဲ သိချင် တယ်ပေါ့……သိတော့ဘာလုပ်မှာလဲ….
Reply same July 24, 2012 - 12:18 pm ဒေသ တခု (သို့) နိုင်ငံတခု ကို ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံက သြဇာလွမ်းမိုးဘို့ က လွယ်ပါတယ်။ခုတောင်မြန်မာပြည်ကို တရုတ်က ပညာတွေ တခုပြီးတခုပြနေပြီး။သြဇာလွမ်းမိုးတယ်ဆိုတာ ချပြစရာမလိုပါဘူး။ဆက်ဆံ ရေးကိုကြည့်တာနဲ့သိပါတယ်။ဒါဆို KIA တွေ ဘယ်ကလက်နက်ကို ဘယ်က ငွေနဲ့ ၀ယ်လဲ။KIA ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာလို့တရုတ်ပြည်မှာ နေနိုင်လဲ???????????????
Reply swe htwe September 1, 2012 - 6:20 pm We don’t believe this message. Why did KIA ask goverment to talk peace in China and how did he get arms?From ???? China !!!